ဖွတ်​ဖုန်း​လေးနဲ့ လည်​ဒယ်​ ပူဒယ်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ဖွတ်​ဖုန်း​လေးနဲ့ လည်​ဒယ်​ ပူဒယ်​
ဖွတ်​ဖုန်း​လေးနဲ့ လည်​ဒယ်​ ပူဒယ်​
Posted by naywoon ni on Jun 1, 2014 in My Dear Diary | 8 comments
မြန်​မာပြည်​မှာ အင်​တာနက်​သုံးရတာကလည်း ကဗျာဆရာ ​မောင်​​ချောနွယ်​ စကားငှားသုံးရရင်​ ၀ဋ်​နာ ကံနာ ပဲ ။ ဆိုင်​မှာ သုံး​နေတုန်းကလည်း သာမာန်​အချိန်​သာ လိုင်​မ​ကောင်းတာ ဆိုင်​ပိတ်​ချိန်​​ရောက်​ပြီဆို လိုင်းက စွတ်​​ကောင်း​နေလိုက်​ပြန်​ပြီ ။ စိတ်​က မချင့်​မရဲနဲ့ အိမ်​ပြန်​ရ​ပေါ့ ။ ဖုန်းက ​လေးငါးသိန်း ရှိမှ ကိုင်​လို့ရမှာဆို​တော့လည်း တစ်​နာရီ နှစ်​ရာ​ကျော်​​ကျော်​​လေးနဲ့ မင်​ဘာသုံးခွင့်​​ပေး​နေတဲ့ အင်​တာနက်​ဆိုင်​​လေးကို မပုန်​ကန်​နိုင်​​သေးဘူး ။ ရသမျှ အချိန်​​လေးကိုပဲ ချက်​တင်​လည်းထိုင်​ ဝါသနာပါတဲ့ စာ​လေးလည်း​ရေး ဖတ်​ချင်​တာ​လေးလည်း ဖတ်​လို့ မန်​မိုရီစတစ်​​လေးနဲ့ ​ဒေါင်းလုပ်​ ဆွဲတန်​တာဆွဲ တစ်​ချိန်​ထဲ ရသ​လောက်​အသုံးချ ဆို​တော့ အဲ့ဒိ အင်​တာနက်​ဆိုင်​​လေးက ​နေ၀န်းနီ ထိုင်​​နေတဲ့ အချိန်​ဆို တစ်​ချို့စက်​​တွေ အလုပ်​မလုပ်​​တော့ဘူးတဲ့ ။ ဂိမ်း​ဆော့​နေတဲ့ သူ​တွေများရင်​​တော့ သိပ်​မသိသာဘူး​ပေါ့ ။ 512mb ပဲ ရှိတာ စက်​အလုံး နှစ်​ဆယ်​​လောက်​တပ်​ထားတာ ဆို​တော့ ။ ပြီး​တော့ ဒီဖရီးအုပ်​ထားတာ ရီစတပ်​လုပ်​လိုက်​တာနဲ့ အကုန်​​ပျောက်​ ပဲ ။ ​နေ၀န်းနီ တို့က စတစ်​ထဲမှာ (IDM ) ကို​ဒေါင်းလုပ်​ဆွဲထားပြီး ထိုင်​တဲ့ခဏ ​ဒေါင်းလုပ်​ကို ရ​အောင်​ဆွဲတာ ။ ဆိုင်​ထိုင်​သက်​ သုံးနှစ်​​ကျော်​​လောက်​မှာ pdf စာအုပ်​ ​ခြောက်​ရာ​ကျော်​ ခုနှစ်​ရာ စုမိတယ်​ဆိုတာနဲလား ။ ​ဒေါင်းလုပ်​ဆွဲထားရင်း စာ​ရေးမယ်​ စာဖတ်​မယ်​ စကား​ပြောမယ်​ ။ ​နှေးတာမြန်​တာထက်​ ဆိုင်​ပိတ်​ချိန်​​ရောက်​ရင်​ ကိုယ့်​အလုပ်​ ပီးဖို့ ပဲ ။ ခဏခဏ ​ဒေါင်းလုပ်​တန်းလန်​နဲ့ ပြန်​ရ​တော့ စိတ်​ထဲက​တော့မ​ကျေနပ်​ ။ ဆင်းကတ်​ ​ထောင့်​ငါးရာတန်​ ဖြစ်​​တော့ အင်း ……. ဖုန်း​လေးတစ်​လုံး​တော့ ၀ယ်​ကိုင်​သင့်​ပြီ​ပေါ့ ။ အိမ်​က ထုတ်​​ပေးတဲ့ ပိုက်​ဆံနဲ့ က ကိုယ်​လိုချင်​တာမရ ။ ဖုန်း ဟမ်းဆက်​ကလည်း သူများကိုင်​တာသာမြင်​ဖူးတာ ဘယ်​က စဖွင့်​ရမှန်း​တောင်​မသိ ။ ဒီ​တော့ ဟမ်းဆက်​​ရောင်း​နေတဲ့ ​ကျောင်း​နေဘက်​ သူငယ်​ချင်းတစ်​​ယောက်​ဆီသွားပြီး ဟမ်းဆက်​နဲ့ ပတ်​သက်​ရာ ပတ်​သက်​​ကြောင်း ​ဈေးနှုန်းက အစ စုံစမ်းရပါတယ်​ ။ သူငယ်​ချင်းကလည်း အလုပ်​တစ်​ဖက်​နဲ့ သူသိတာ ​ပြောပြ ။ ​နေ၀န်းနီကလည်းမှတ်​​ပေါ့ ။ ​နေ၀န်းနီ မှတ်​မိတာက​တော့ ဖုန်းအမျိုးအစား​တွေ ကွဲ​နေ​ပေမဲ့ အင်​တာနက်​ ချိတ်​လို့ရတာနဲ့ အင်​တာနက်​ချိတ်​လို့မရတာ နှစ်​မျိုးပဲကွဲတယ်​ဆိုတာမှတ်​မိတယ်​ ။ အင်​တာနက်​ချိတ်​လို့မရတဲ့ ဖုန်းကို နှပ်​ဖုံး ဇိဖုန်းတဲ့ ။ ရွာသား​တွေ​ခေါ်တာ ။ ခုလုပ်​​လေး​တွေ နှိပ်​ပြီး ဖုန်း​ခေါ်ရတယ်​​လေ။ ​နော့ …. ဖုန်းမျက်​နှာပြင်​​ပေါ်မှာ နှိပ်​​စေ့ (နှိပ်​စိ) ​လေး​တွေလို ပါလို့ စိဖုန်းဇိဖုန်းလို့ ​ခေါ်တာ ။ ​အော်​ ဟုတ်​လား ။ အင်​တာနက်​ ချိတ်​တဲ့ ဖုန်းက ပွတ်​ဖုန်းကွ တဲ့ ။ ဘာလို့လဲ​ပေါ့ ……။ ပြန်​​မေးရ​သေးတယ်​ ။ ဟ ….. ကိုယ်​လိုချင်​တာကို လက်​ညှိုး​လေး ဒါမှ မဟုတ်​ လက်​မ​လေးနဲ့ ပွတ်​ဆွဲ လိုက်​ယုံနဲ့ ​ရောက်​သွား ပြီးသွားတာ ။ အနားမှာ ရှိတဲ့ ရွာသားကြီး တစ်​​ယောက်​က ၀င်​​ပြောတယ်​ ။ ဖွတ်​ဖုန်းတဲ့ ။ ကြားလိုက်​တဲ့ သုံး​လေး​ယောက်​က​တော့ ပြုံးစိစိနဲ့ ။
လုပ်​စမ်းပါဦးဗျ ။ တစ်​​ယောက်​က ပွတ်​ တစ်​​ယောက်​က ဖွတ်​ ဘာလို့ အ​ခေါ်ကွဲသွားရသလဲ ။ ဒီလိုဗျ ။ စကား​ပြော​တော့ ကြားရတစ်​ချက်​မကြားရတစ်​ချက်​ ။ တစ်​မိနစ်​ကို ငါးဆယ်​ ဆိုတဲ့ အပြင်​ တစ်​လ နှစ်​​ထောင့်​ငါးရာ ဖိုး မကုန်​ရင်​ ဖျက်​မယ်​ဆို​တော့ ဖုန်းရှိတဲ့ အိမ်​က ဖွတ်​တက်​တာပဲ ။ အင်​တာနက်​ချိတ်​​တော့လည်း အသံမထွက်​ပဲနဲ့ ပိုက်​ဆံကုန်​တာ ။ ဖွတ်​ပဲ​လေ ။ အဲ့​တော့ ဖွတ်​ဖုန်း​ပေါ့ ။
သူရှင်းပြလိုက်​မှ ဖုန်းကိုင်​ချင်​စိတ်​​တောင်​ ​ပျောက်​သွားတယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီတို့ဆီမှာက တရုပ်​ဟမ်းဆက်​ပဲ အ​ရောင်းဆိုင်​ရှိတာ ။ ဘယ်​ကလာတာ ညာကလာတာ တရုပ်​မဟုတ်​ဖူး ဆိုလို့ သွားမကြည့်​လိုက်​နဲ့ ။ တံဆိပ်​ပဲ ကပ်​ထားတာ ။ ပစ္စည်းက လက်​ရာ ကြမ်းကြမ်းနဲ့ တရုပ်​ပဲများတယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီ သူငယ်​ချင်းကလည်းအား​ပေးရှာပါတယ်​ ။ ဒီမြို့မှာ ကိုးဆယ်​ရာနှုံးက တရုပ်​ချည့်​ပဲ ။ တရုပ်​မှန်းသိသိနဲ့  ၀ယ်​ကိုင်​တာက တံဆိပ်​ကလွဲ ကျန်​တာတရုပ်​ဖြစ်​​နေတာထက်​ စာရင်​​တော်​​သေးတယ်​ ။ ဒါနဲ့ပဲ အခု လက်​ရှိတရုပ်​ ဖုန်း​လေး ၀ယ်​ဖြစ်​တယ်​ဆိုပါ​တော့ ။ ဖုန်းမှာထည့်​​ပေးလိုက်​တဲ့ အပလီ​ကေးရှင်း​တွေ ထဲက အသုံးဝင်​ပုံ​လေး​တွေ လည်း​ပြောလိုက်​​သေး ။ ခင်​ဗျားတို့က​တော့ သိပီးသားပဲ ။ ​နေ၀န်းနီက​တော့ ​သောက်​အ ကြီးဆို​တော့ နား​ထောင်​ရ​သေးတယ်​ ​။ ဘ​ရောက်​ဇာ​တွေလဲ သုံး​လေးခုထည့်​​ပေးလိုက်​​သေးတယ်​ ။ စသုံးတဲ့ ညက​တော့ ဟုတ်​မလိုလိုပဲ ။ ဖုန်းထဲ ပိုက်​ဆံလည်း ထည့်​ကာစဆို​တော့ ။ ​နောက်​ည​တွေကစ ပြဿနာ ​သေး​သေး​လေး​တွေ ​သောင်း ​ခြောက်​​ထောင်​ စ​တွေ့တာပဲ ။ ကွန်​ပြူတာ​ပေါ်မှာ ​မောက်​စ်​နဲ့ ​ရွှေ့လာတဲ့​ဟာ …… ။ ခု​တော့ ဘာမဟုတ်​တဲ့ ပိစိ​ကွေး မှန်​ပြင်​​လေး​ပေါ်မှာ လက်​ညိုး​လေးနဲ့ ပွတ်​ပွတ်​ပြီး ဆွဲ​နေရတာ အားမရ ။ ပြီး​တော့ အင်​တာနက်​ ​ကော်​နက်​ရှင်​ မရှိတဲ့ အခါ ( တစ်​ခါတစ်​​လေ လိုင်းကို​ပျောက်​သွားတာ ) လိုင်းကျ လိုင်း​နှေးတဲ့ အခါမျိုးမှာ လက်​ညိုးနဲ့ ပွတ်​လို့လည်းမရ ။ လက်​မနဲ့ ပွတ်​ဆွဲ​တော့လည်း မှန်​​ပေါ်မှာ လက်​ရာကြီးပဲ ထင်​​နေတယ်​ ။ ဘယ်​လိုမှမ​ရွှေ့။ လိုင်းတက်​​နေပြန်​​တော့လည်း နဲနဲ​လေး ထိလိုက်​တာနဲ့ ​နောက်​တစ်​မျက်​နှာကူးသွား ။ ဖွဘုတ်​မှာဆိုပိုဆိုး ။ ဘယ်​ဘက်​လက်​နဲ့ သုံးရင်​ ​ကော်​မန့်​​ပေါက်​ ပွင့်​သွား​ရော ။ ညာဘက်​လက်​နဲ့ သုံးရင်​ ရှယ်​ယာ ​ဘောက်​ပွင့်​သွားပြန်​ ။ စာရိုက်​ရတာက လက်​ညိုး​လေးတစ်​​ချောင်းနဲ့ အားမရ ။ တစ်​ခုခုဖွင့်​လိုက်​လို့ ​တော်​​တော်​နဲ့ မပွင့်​ရင်​ စိတ်​မရှည်​။ ဘ​ရောက်​ဇာ ပါသမျှ လိုက်​ဖွင့်​ပစ်​ ။ ကွန်​ပြူတာမှာက ဖိုင်းယား​ဖောက်​ကိုပဲ Tab ​တွေအများကြီးဖွင့်​ဖူးတာ ။ ဆိုင်​ကလည်း ဒီတစ်​ခုတပ်​​ပေးထားတာကိုး ။ ဖုန်းမှာလည်း ဘ​ရောက်​ဇာ တစ်​ခုထဲ Tab ​တွေ ဖွင့်​လို့​တော့ရပါရဲ့ ။ အပို နှစ်​ခု​လောက်​ရှိ​နေ​သေး​တော့ ထပ်​ဖွင့်​ ။ ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​က သူ့အပလီ​ကေးရှင်းနဲ့ သူ​ပေမယ့်​ ​ကော်​နက်​ရှင်​ အဲလ်​လာ ချည့်​ပြပြ​နေပြီး အပ်​ပတူဒိတ်​မတက်​ ။ ဟိုမှာ ကိုယ့်​ကို ​ကော်​မက်​​ပေး​နေပီ ဖွင့်​လို့က မရ​သေး ။ ဘ​ရောက်​ဇာထဲက၀င်​ ကြည့်​ ။ တစ်​ခု​ကောင်းတာက ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​ပဲ ဖွင့်​ဖွင့်​ ဂဇက်​တက်​ပဲ ဖွင့်​ဖွင့်​ ယူဇာနိမ်းနဲ့ ပါစ်​၀တ်​ ​ဆေ့ဖ်​ လုပ်​​ပေးထားရင်​ ​နောက်​တစ်​ခါ ထပ်​ရိုက်​စရာမလို​တော့ဘူး ။ စိတ်​ပျက်​ဖို့ ​ကောင်းတာက ဖွင့်​ထားပီးသား စာက်​မျက်​နှာကို ​နောက်​တစ်​ကြိမ်​ပြန်​ဖွင့်​လိုက်​ရင်​ အဖြူပလိန်းကြီး​ပေါ်​နေပြီး လုဒ်​ဒင်း ပြန်​ဖြစ်​​နေတာ တစ်​​မေ့တစ်​​မော ​စောင့်​​နေရတာ တစ်​မိနစ်​ နှစ်​ကျပ်​ ။ ဒါ​တောင်​ ဂျီ မို့ ဒဗလျူတို့ စီတို့ဆို ​လေးကျပ်​ ။ စာအုပ်​​တွေ ​ဒေါင်းလုပ်​ လုပ်​​နေကျ​နေရာသွား ​ဒေါင်းလုပ်​ လုပ်​ထား ။ လိုင်းကျပြန်​​ဒေါင်း ။ ရက်​နဲနဲ ကြာလာ​တော့ ပျင်းလာတယ်​ ။ ဖုန်းအားဖြည့်​ရတာကလည်း အလုပ်​တစ်​ခု ။ ​( နောက်​​တော့ သူငယ်​ချင်းတစ်​​ယောက်​က ​ပြောတယ်​ ။ အိပ်​တဲ့ အချိန်​အားသွင်းထားလိုက်​ ။ မနက်​ကျမှ ပြန်​ဖြုတ်​ ဘာမှ မဖြစ်​ဖူး ဆို ။ ခု​တော့ အဲ့လိုပဲလုပ်​​နေတယ်​ ။ အားအပြည့်​ထည့်​ထားလဲ ​ခြောက်​နာရီ​လောက်​ပဲ သုံးလို့ရတာ )
ပျင်း​တော့ ဘာလုပ်​ လဲ ဆို​တော့ ဂိမ်းဘက်​လှည့်​သွား​ရော ။ ဂဇက်​တက်​က ၀မ်းဘ​ရောက်​ဇာ ကဖွင့်​ရတာ အဆင်​​ပြေတာနဲ့ အမြဲဖွင့်​ထားတာက ​ရှေ့မှာ စာ​ရေး​နေလိုက်​တုန်းခဏ ။ ( စာ​ရေးတာက နုတ်​ပ်​မှာ ​ရေး​နေတာပါ ။ ​ကော်​မန့်​ ရှည်​ရှည်​​ပေးချင်​ရင်​လဲ အဲ့မှာ​ရေး မှအဆင်​​ပြေတယ်​ ။ လိုင်းကျရင်​​ပျောက်​သွားတတ်​လို့ ။ ပို့စ်​တင်​ချင်​လဲ အဲ့မှာပဲ အရင်​သွား​ရေးတာ ။ ​ကော်​မန့်​​ပေးဖို့ ပို့တင်​ဖို့ ပြန်​ကြည့်​လိုက်​ရင်​ လုပ်​ဒင်း ဖြစ်​​နေပြန်​ရင်း ……. .။ ​နောက်​​တော့ ဘာရမလဲ စာဖတ်​ချင်​ရင်​ စာ​ရေးချင်​ရင်​ အင်​တာနက်​ ခဏ ပြန်​ပိတ်​ ။ အင်​တာနက်​ပိတ်​လိုက်​လဲ အဲ့ ၀က်​ဒ်​ ပိတ်​ကိုသာ ​ဖျောက်​မပစ်​နဲ့ ​ပျောက်​မသွား ဘူး ။ အဲ့တစ်​မျက်​နှာ​တော့​အေး​ဆေး ဖတ်​လို့ရတယ်​ ။ ဆို​တော့ ကိုယ်​ဖတ်​ချင်​တာ ဖတ်​ပြီးမှ ​ကော်​မန့်​​ရေးချင်​လဲ နုတ်​ထဲမှာ ​ရေးပြီးမှ အင်​တာနက်​ပြန်​ဖွင့်​ လုပ်​ဒင်း လည်​​နေတာ ​စောင့်​ ။ အင်း လည်​တယ်​ လည်​တယ်​​ပေါ့ ။ ကြာ​တော့ ဖုန်းကို ကိုင်​ထားတဲ့ လက်​ပါ ပူလာ​ရော ……. ။ အဲ့​တော့လည်း ပူတယ်​​ပေါ့ဗျာ ။ ဗမာစကား တစ်​ခုရှိသား အစက ဘာမှန်းမသိဘူး ။ လည်​ဒယ်​ ပူဒယ်​ ဆိုလား ။ အဲ့လိုပဲ အသံထွက်​တယ်​နဲ့ တူရဲ့ ။ ​နေ၀န်းနီ​တော့ ရွာသား​တွေ ​ခေါ်တဲ့ ဖွတ်​ဖုန်း ကိုင်​မှပဲ ​စော​စောက လည်​ဒယ်​ ပူဒယ်​ ဆိုတဲ့စကား ကို နားလည်​သလိုလို ရှိသွား​တော့တာပဲ ။ ခု​တော့ လည်း ညည ဆိုရင်​ လည်​ဒယ်​ ပူဒယ်​နဲ့ တစ်​မိနစ်​ နှစ်​ကျပ်​ နှစ်​ကျပ်​ ​ပေး​နေရပါတယ်​ ။
မြန်​မာ ပြည်​မှာ အင်​တာနက်​သုံးရတာက တစ်​ကယ့်​ကို ၀ဋ်​နာ ကံနာ ပါ ။
အဲဒီဝဋ်နာ ကံနာနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားနေရလို့ပဲ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာကြီးပါလို့ ပြောနိုင်တာ မဟုတ်လား။
ကျနော်လည်း.. ရွာထဲမှာ ပိုစ့်တင်တာတို့ .. ကွန်မန့်ပေးတာတို့ ကို..
အဘနီလိုပဲ..ဖုန်းနဲ့ကလိတယ် ..။
ဘက်ထရီ တော်တော်ကုန်တယ်.. ။
လိုင်းက မကောင်းတာကများတယ်.. ။
ပေးရတာနဲ့ တန်တဲ့ .. အရည်အသွေး….လိုချင်တယ်..
အိမ်သာနက်သုံးရတာ ဘက်ထရီ တော်တော်ကုန်တယ်..
” မြန်​မာပြည်​မှာ အင်​တာနက်​သုံးရတာကလည်း
ကဗျာဆရာ ​မောင်​​ချောနွယ်​ စကားငှားသုံးရရင်​ ၀ဋ်​နာ ကံနာ ပဲ ”
ဆိုင်​ထိုင်​သက်​ သုံးနှစ်​​ကျော်​​လောက်​မှာ pdf စာအုပ်​ ​ခြောက်​ရာ​ကျော်​ ခုနှစ်​ရာ စုမိတယ်​ဆိုတာနဲလား ။ ​ဒေါင်းလုပ်​ဆွဲထားရင်း စာ​ရေးမယ်​ စာဖတ်​မယ်​ စကား​ပြောမယ်​ ။ ​နှေးတာမြန်​တာထက်​ ဆိုင်​ပိတ်​ချိန်​​ရောက်​ရင်​ ကိုယ့်​အလုပ်​ ပီးဖို့ ပဲ ။
ပီဒီအက်ဖ်တွေဖတ်ဖြစ်သလားတော့မသိ..။ ကိုရင်မဖတ်ဖြစ်ရင်.. အဲဒီဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားတာတွေဟာ.. အလဟသဖြစ်တာပေါ့…။
တခြားသူတွေရဲ့ အင်တာနက်ဘန်းဝသ်သုံးနိုင်တဲ့.. အခွင့်အရေးကို.. ပိုပိုမိုမိုအလွဲသုံးစားလုပ်ဖြစ်သွားတာလို့.. မထင်မိဖူး..မဟုတ်လားဟင်င်…
အဲဒါ… မြန်မာတို့ရဲ့.. အင်တာနက်.. ၀ဋ်​နာ ကံနာ ရဲ့.. အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်မှုပါပဲ..။
မှတ်ချက်။ ။ ကိုရင်နေ့ကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်..။ ကံကံရဲ့အကျိုးကို… ကိုရင့်စာအရကောက်ပြီး.. ရှင်းပြတာလို့.. ယူဆစေလို..။
စာအုပ်​​တွေက ဖတ်​ဖတ်​တယ်​ ကိုခိုင်​ရဲ့ ဖတ်​ဖြစ်​ရုံတင်​မဟုတ်​ဘူး လာ​တောင်းတဲ့သူမှန်​သမျှ ယူ​စေပဲ ။ ခုလည်း ဖုန်းထဲမှာထည့်​ထားပြီး ဖတ်​ချင်​တဲ့သူရှိရင်​ ​ပေးတယ်​ ။ ဆိုင်​မှာထိုင်​တုန်းက ကျွန်​​တော့အ​ပေါ် သိပ်​မညိုငြင်​ကြဖူး ။ အခြားသူ​တွေက ရံဖန်​ရံခါ လာကြတာ ။ ဂျီ​တော့ ​လောက်​ Facebook ​လောက်​ပဲ ဖွင့်​သုံးကြတာ ။ သူတို့က ထိုင်​လဲ ခဏပဲ ။ ဆိုင်​မှာ အထိုင်​များတာက ဂိမ်း​ဆော့​နေတဲ့ က​လေး​တွေနဲ့ ကျွန်​​တော်​ပဲ ။ ဆို​တော့ကာ ကျွန်​​တော့အ​နေနဲ့ အများကိုသိပ်​အ​နှောက်​အယှက်​ မ​ပေးခဲ့ဖူးလို့ထင်​ပါတယ်​ ။ ကျွန်​​တော်​​နေတဲ့ မြို့က သိပ်​ပြီး မသုံးတတ်​ကြ​သေးတာရယ်​ စိတ်​၀င်​စားမှု နည်းတာရယ်​နဲ့ လူနဲစု​လောက်​ပဲ အင်​တာနက်​ဆိုင်​ကို ​ရောက်​ကြတာ ။ က​လေး​တွေ စကားနဲ့​ပြောရရင်​ ကျွန်​​တော်​က ဆရာကြီးပဲ ။ ဘယ်​ကမှသင်​ထားလို့မဟုတ်​ ။ စိတ်​၀င်​စားမှုနဲ့ ဟိုစမ်းဒီစမ်းနဲ့ လုပ်​တတ်​သွားတာ ။
ရောက်တဲ့ အရပ်မှာ ပျော်အောင် သာနေပါ ကိုနေကြီးရေ။
တွေ့ တဲ့ ကော်နက် ရှင် နဲ့  သင့်အောင် သုံးပါဗျာ။
ဒါ ဖုန်း နဲ့ ပေးတဲ့ ကွန်းမန့်ပါ။
ဖုန်းနဲ့ဘဲစာရေးစာဖတ်လုပ်နေတာ ၂ နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ
ပို့စ်အနေနဲ့ ၅၀ ကျော် ၆၀ နီးနီး ဖုန်းနဲ့သာရိုက်တင်ခဲ့ရတာပါ ။
၂ နှစ်အတွင်းဟာဝေးဟန်းဆက်သုံးလုံး အငွေ့ပျံသွားပြီးပါကြာင်းးးးးး